जब इन्स्टाग्रामले आज सक्रिय says अनुयायीहरू ▷ says भन्छ
जब आज इन्स्टाग्राम सक्रिय भन्छ
केहि समयको लागि, इन्स्टाग्राम प्लेटफर्ममा एक व्यक्तिको अन्तिम जडानको प्रदर्शन सहित अपडेटहरूको श्रृंखला लागू गरियो। साथै, यो नयाँ कार्य समयको साथ साथ सुधार भएको छ; अन्तिम जडान अधिक सजीलो र प्रभावकारी रूपमा देखाउँदै। ठीक छजब आज इन्स्टाग्राम सक्रिय भन्छ? उत्तर एकदम सरल छ, यस लेखमा हामी यसको केहि व्याख्या गर्नेछौं।
जब आज इन्स्टाग्राम सक्रिय भन्छ, किनभने प्रयोगकर्ताले आफ्नो खातामा लग ईन गरेको छ र हाल यसमा अन्तर्क्रिया गर्दैछ। यो नयाँ सूचक फेसबुक प्लेटफर्ममा लागू गरिएकोसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ, जहाँ प्रोफाईल तस्वीर वा प्रयोगकर्ताको नामको क्रमशः हरियो घेरा देखाइन्छ। आज, हामी व्याख्या गर्नेछौं जब आज इन्स्टाग्राम सक्रिय भन्छ, साथै यस नयाँ विकल्पको मौलिक प्रकार्य र कसरी तपाईं यसलाई निस्क्रिय गर्न सक्नुहुन्छ; यदि तपाईं अधिक गोपनीयता चाहानुहुन्छ।
यसको मतलब के हो जब इन्स्टाग्रामले "आज सक्रिय" भन्छ?
त्यस समयमा जब इन्स्टाग्रामले यो नयाँ सुविधा लाई प्रकाशमा ल्यायो, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यस विकल्पको सही अर्थ सोच्न थाले। धेरै जसो यो व्हाट्सएप सुविधासँग सम्बन्धित छ, तिनीहरू सँधै समान हुँदैनन्। जब प्लेटफर्मले यो विकल्प कार्यान्वयन गर्‍यो व्यक्तिले कहिले सन्देश देख्यो भनेर हेरेन; आजकल इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई यो हेर्न अनुमति दिन्छ।
अब, यस सुविधाको अर्थ प्राय: तपाईंले निजी इन्स्टाग्राम सन्देशमा कुराकानी खोल्दा वा व्यक्तिको प्रोफाइल पहुँच गर्दा गर्नुपर्दछ। यसैले, आज सक्रिय र सक्रिय अहिले केवल सन्दर्भहरू हुन् जसले तपाईंलाई एक व्यक्ति सामाजिक नेटवर्कमा उपलब्ध भएको बेला बताउँछ।
यसले तपाइँलाई चासो दिन सक्छ: इन्स्टाग्राममा हरियो डटको मतलब के हो?
के दृश्य वास्तविक समयमा छ?
उत्तर हो हो, र यो अपेक्षित हुनुपर्दछ, किनकि इन्स्टाग्राम एक सामाजिक नेटवर्कको रूपमा चिनिन्छ जुन यसका प्रयोगकर्ताहरूलाई वास्तविक समयमा अन्तर्क्रिया गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसकारण, प्रयोगकर्ताको कनेक्शन स्थितिको सम्बन्धमा, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि यो हाल जडान भएको छ वा छैन। इन्स्टाग्राममा, दुई अद्यावधिकहरू देखाइनेछ, यदि तपाईं त्यो सटीक क्षणमा जडित हुनुहुन्छ, वा यदि तपाईं पहिले जडान हुनुभयो भने; यो क्रममा प्रयोगकर्ताहरू बीचको अन्तर्क्रियामा सहयोग पुर्‍याउँछ।
यो नयाँ फिचरले तपाईंलाई प्रयोगकर्ताको जडान स्थिति जान्न अनुमति दिन्छ; यसैले अन्तक्रिया र यससँगको सम्पर्कलाई सजिलो बनाउँदै। केहि चीज जुन तपाईं प्रोफाईल खोज्दै गर्दा थाहा पाउन सक्नुहुन्नथ्यो, अर्को प्रयोगकर्ताबाट द्रुत प्रतिक्रियामा शर्त लिई यदि तपाईं उहाँसँग सम्पर्क राख्न चाहानुहुन्छ भने।
अब, अघिल्लो इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई जो जोडिएको थियो देखायो, जबकि फरक तरीकाले। यो पाठको माध्यमबाट देखाइएको थियो कि यदि व्यक्ति सक्रिय छ, वा यो कति पहिले थियो भनेर संकेत गर्‍यो। जे होस्, यो नयाँ सूचक जुन प्लेटफर्मले लागू गर्यो धेरै सरल छ, किनकि यसले तपाईंको प्रोफाइल चित्रमा अवस्थित हरियो डट वा सर्कल मार्फत जडान स्थितिलाई दर्साउँछ।
नयाँ अपडेटको भिन्नता यो कसरी देखाइयो पहिलेको तुलनामा, हरियो डट प्लेटफर्ममा धेरै ठाउँमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, जबकि पाठ मात्र इन्स्टाग्राम डाइरेक्टमा प्रदर्शित गरिएको थियो। लगातार अपडेटको साथ जुन सामाजिक नेटवर्कले उत्पन्न गर्छ, प्रायः यो नयाँ कलगइन दुबै प्रयोगकर्ताको प्रोफाइलमा देख्न सकिन्छ, जस्तै उनीहरूका कथाहरू र टिप्पणीहरूमा पनि।
आज कहिले इन्स्टाग्रामले सक्रिय भन्छ?: जडान स्थिति
अघि, जब इन्स्टाग्रामले यो नयाँ प्रकार्य कार्यान्वयन गर्‍यो, केवल एक प्रयोगकर्ताको जडान स्थिति "सक्रिय अब" मार्फत देखाईन्छ। यद्यपि सामाजिक नेटवर्कले लगातार सुधार गरेको छ। जब आज इन्स्टाग्राम सक्रिय भन्छ यो तपाईंको प्रोफाइल तस्वीर मा अवस्थित हरियो घेरा मार्फत गर्छ।
यद्यपि यस जडान स्थितिको प्रदर्शन मात्र लागू गर्न सकिन्छ यदि तपाईसँग विकल्प सक्रिय गरिएको छ, केवल तपाईले हेर्न चाहानु भएको व्यक्तिको जस्तो। त्यसकारण यस विकल्पलाई सक्रिय गर्नाले, प्लेटफर्ममा अझै रहेका व्यक्तिहरूले तपाईं जडित र उपलब्ध भएको फेला पार्न सक्नुहुनेछ। उही तरीकाले, जब आज इन्स्टाग्राम सक्रिय भन्छ यसले प्रत्यक्ष वा निजी मेसेजि through मार्फत पनि गर्दछ; ताकि अर्को व्यक्तिको जडान स्थिति देखा पर्दछ तपाईंले पहिले योसँग कुराकानी गर्नुपर्नेछ।
आज इन्स्टाग्राम डायरेक्टको माध्यमबाट सक्रिय
यो नयाँ सुविधा व्हाट्सएप प्लेटफर्ममा प्रयोग गरिएको जस्तै मिल्दोजुल्दो छ। यो एक धेरै विवादास्पद समारोह थियो, जसले सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई खुशी पार्दैन, प्लेटफर्म बनाउँदै यसलाई वैकल्पिक बनाउनुपर्‍यो, यसलाई सक्रिय पार्ने र यसलाई प्रयोगकर्ताको प्राथमिकता अनुसार निष्क्रिय पार्नुपर्‍यो। त्यस्तै गरी यो भएको छ जब आज इन्स्टाग्राम सक्रिय भन्छ.
जब आज इन्स्टाग्राम सक्रिय भन्छ सीधा सन्देश सेक्सन को माध्यम बाट, यो तब हुन्छ जब प्रयोगकर्ता सामाजिक नेटवर्कमा जडान भएको छ। उही तरीकामा, तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ यो कति लामो समय सम्म जडित थियो, यदि यो समयमा उपलब्ध छैन भने।
यो जानकारी क्रमश: प्रयोगकर्ता नामको तल प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ दुईवटा केसहरू पनि छन्: जब इन्स्टाग्रामले "आज सक्रिय" भन्छ यो किनभने व्यक्ति धेरै घण्टा पहिले लग ईन गरिएको छ; जहाँसम्म, जब यो "सक्रिय अहिले" भन्छन यो किनभने प्रयोगकर्ता हाल लग ईन गरिएको छ, र सामाजिक नेटवर्कमा अन्तर्क्रिया गर्दैछ। यदि विकल्प निस्क्रिय पारिएको छ भने, तपाईं यो डाटा को कुनै पनि हेर्न सक्षम हुनुहुने छैन।
"सक्रिय आज" सँग इन्स्टाग्रामले के प्राप्त गर्न खोज्छ?
सामाजिक नेटवर्कले के भनेका लागि, इन्स्टाग्रामले यो डेटाको ज्ञानको माध्यमबाट आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूको अन्तर्क्रियामा सहयोग पुर्‍याउँछ। यस सुविधाले वास्तविक समयमा कुराकानीहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्दछ। यस तरीकाले प्राप्त गर्दै, थप तरल पदार्थ कुराकानीहरू र यसको फलस्वरूप, प्रयोगकर्ता प्लेटफर्ममा कनेक्ट छ वा छैन भन्ने ज्ञान।
अब यो नयाँ इन्स्टाग्राम फीचरले मात्र काम गर्न सक्दछ यदि दुवै प्रयोगकर्ताहरूमा सक्रिय विकल्प छ र प्लेटफर्ममा एक अर्कालाई पछ्याउने। यो निरन्तर गुनासोहरूको परिणामको रूपमा प्रयोगकर्ताले प्रस्तुत गरेको गोपनीयताको अभावको आधारमा जुन यो विकल्पले उत्पन्न गर्‍यो।
इन्स्टाग्राममा जडान स्थिति कसरी लुकाउने?
जे होस्, कुनै पनि सामाजिक नेटवर्क को लागी 100% गोपनीयता को आफ्नो उपयोगकर्ताहरु को पेशकश को लागी विशेषता गरीएको छैन; आज त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् जुन तपाईंलाई तपाईंको प्रोफाइल कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ, ताकि तपाईंले साझा गर्नुभएको जानकारी अधिक निजी हो। यसैले, इन्स्टाग्राम हाल सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा लोकप्रिय अन्तर्क्रिया प्लेटफर्महरू मध्ये एक भएको छ, तपाईंलाई विभिन्न कन्फिगरेसनहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईंलाई तपाईंको सामग्री केवल रूचि राख्ने मान्छेलाई मात्र देखिने बनाउँदछ।
यसको आधारमा धेरै प्रयोगकर्ताहरूले नयाँ इन्स्टाग्राम विकल्प लुकाउन रुचाएका छन्। यो पूरा गर्न प्रक्रिया सरल हुनेछ, तपाईंले भर्खर आफ्नो प्रयोगकर्ता प्रोफाइलमा जानुपर्नेछ र यसका विकल्पहरू खोजी गर्नुपर्नेछ। एक पटक अवस्थित भएपछि, तपाइँ "गोपनीयता र सुरक्षा" सेक्सनमा जानुपर्नेछ।
त्यहाँ एकचोटि, तपाईंले सेक्सन स्थिति "भन्नुहोस्" भन्ने सेक्सन खोज्नु पर्छ। यहाँ, तपाईले विकल्पहरू देख्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई चयन गर्न दिइन्छ। विकल्प छनौट गर्नको लागि "गतिविधि स्थिति देखाउनुहोस्", जुन प्लेटफर्मका अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाइँको जडान स्थिति लुकाउनको लागि जिम्मेदार छ। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ कि तपाईं कहिले जडान भएको देख्न कोही चाहन्न, तपाईंले यसलाई निष्क्रिय गर्नुपर्दछ। जे होस्, तपाईले दिमागमा राख्नु पर्छ कि एक पटक निस्क्रिय पारिएपछि तपाई अन्य दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्न जब अन्य प्रयोगकर्ताहरू जडान हुन्छन्।
इन्स्टाग्रामले चेतावनी पनि दिन्छ यदि तपाईं “लेखी” हुनुहुन्छ वा “क्यामेरामा”!
तपाईंको भर्खरको इन्स्टाग्राम अपडेटहरू मध्ये एक अर्को, तपाईंको कनेक्शन स्थिति जान्नको लागि सम्बन्धित हो, "टाइपिंग" र "क्यामेरामा" चेतावनी। जे होस्, यो कोड प्रयोगकर्ताहरूलाई समय देखाउनको लागि हो जब अर्को व्यक्तिले सन्देश पठाउँदै वा लेखिरहेको हुन्छ।
यो नयाँ सुविधा फेसबुक मेसेन्जर र व्हाट्सएप जस्ता निजी मेसेजि plat प्लेटफर्महरूमा फेला परेको जस्तै मिल्दोजुल्दो छ। यो नयाँ अद्यावधिक हो जुन कसैले पनि अपेक्षित गरेन किनकि अहिलेसम्म इन्स्टाग्रामले मात्र सन्देशहरूको "पठन" स्थिति देखाएको थियो।
अब, "सम्पत्ति आज" को इन्स्टाग्रामद्वारा लागू गरिएको फिचर जस्तै; "लेखन" प्रदर्शन गर्न विकल्प परिमार्जन योग्य छ। यो बुझ्नको लागि एकदम सरल छ, जब तपाईंले आफैंमा सन्देश लेख्ने फेला पार्नुहुनेछ, यो स्थिति तपाईंको प्रोफाइल चित्रको छेउमा प्रदर्शित हुनेछ। उही तरीकामा, यस क्षणमा तपाई क्यामेरा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, व्यक्तिले यसलाई "क्यामेरामा" च्याटमा देखाइएको पाठको माध्यमबाट हेर्न सक्दछ।
कसरी "Writing" देखाउँदै Instagram लाई रोक्न?
यदि तपाईं एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले तपाईंको गोपनीयतालाई बढी महत्त्व दिनुहुन्छ, र यो सुविधाले धेरै आनन्द उत्पन्न गर्दैन भने, चिन्ता नलिनुहोस्, यसलाई असक्षम गर्ने एक तरिका छ। यो गर्नका लागि तपाईले इन्स्टाग्राम सेटिंग्समा जानु पर्नेछ र "गतिविधि स्थिति" सेक्सन फेला पार्नु पर्नेछ। अब माथि उल्लिखित सेक्सन असक्षम पार्नुको सट्टा तपाईले "कुराकानी गतिविधि देखाउनुहोस्" विकल्प निष्क्रिय गर्नुपर्नेछ।
यस सुविधाको एक मात्र लाभ यो छ कि जडान स्थिति विपरीत, प्रदर्शन पारस्परिक छैन। त्यो हो, यदि तपाईं यो प्रकार्य अक्षम गर्नुभयो भने कि जब तपाईंले लेखिरहनु भएको मानिसहरूले देख्दैनन्; अन्य व्यक्तिले प्रतिक्रिया गरिरहेको बेला तपाईं अझै कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ, जबसम्म तिनीहरूसँग कार्य अक्षम पारिएन।
जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई रोक्दछ
जब इन्स्टाग्रामले भुक्तानी सुरु गर्दछ
कसरी इन्स्टाग्राममा फोटोहरू सम्पादन गर्ने ...
कसरी इंस्टाग्राममा भिडियो अपलोड गर्ने ...
कसरी गर्ने ...
कसले तपाईंलाई कसले रोक लगाएको छ भनेर कसरी थाहा पाउने ...